Waa tan sida loo ogaado haddii sushiku dhab ahaantii yahay mid cusub oo badda-Sweed-NANTONG CHITSURU FOODS CO., LTD.
Waa tan sida loo ogaado haddii sushiku runti yahay mid cusub
Waqtiga: 2018-10-07 Hits: 120
Marka ay timaado waxyaabo aannaan noolaan karin la'aanteed, sushi macaan ayaa xaqiiqdii halkaas taal. Dhab ahaan, haddii ay annaga na ahaan lahayd, waxaan la ruxruxi lahayn daabacadaha sushi iyo farshaxanka ciddiyaha 24/7 maxaa yeelay jacaylkeennu waa dhab. Waxaanan hubnaa in badan oo idinka mid ahi ay qadarinayaan sushi wanaagsan, sidoo kale. Laakiin maxaa ka dhigan "sushi wanaagsan," sidee se ku garan kartaa in sushiku cusub yahay ...
Sushi waxay noqotay ikhtiyaar cunno tagitaan deg deg ah, laga bilaabo tempura iyo teriyaki ilaa sashimi, nigiri, iyo suxuun dhaqameed aad uqurux badan. Haa, sushi sidoo kale waxay noqotay mid guud. Si kastaba ha noqotee, markaad iibsaneyso inta badan kalluunka ceyriinka ah iyo bariiska qabow ee inta badan laga helo sanduuqyada horay loo sii diyaariyay, arrimuhu si qurux badan ayaa su'aal looga keeni karaa, si dhakhso leh ayey u dhici karaan.
Waan ognahay inaysan suurtagal ahayn in gebi ahaanba laga fogaado kalluunka subpar, laakiin waxaa jira waxyaabo yar oo aad iska hubin karto si aad u hubiso in suxuuntaada sushi ay ugu fiicantahay.
Hal dariiqo oo wanaagsan oo lagu garan karo in sushiku cusub yahay waa urta. Sida gudaha ku jirta, kalluunka cusub waa inuusan lahayn wax ur ah gabi ahaanba, sidoo kale makhaayaddu waa inaysan yeelan. Dukaan nadiif ah oo aan ur lahayn had iyo jeer waa tilmaan wanaagsan oo shaqaaluhu ka taxadaraan badbaadada cuntada iyo tayada. Laakiin haddii ay tahay inuu ur yeesho, kuugga cuntada adduunka caanka ku ah Hidekazu Tojo wuxuu leeyahay, “makhaayadaha sushi ee wanaagsan waa inay ursadaan sida qajaar ama qaraha.”
Qaado ilbiriqsi si aad u hubiso hilibka kalluunka. Waa inuu ahaadaa mid dhalaalaya, tarjumaya, oo ka madhan caano kasta oo caano ah. Muuqaal caajis ah, kalluun dhuuban ayaa ah calaamado waaweyn oo sushiku ka baxsan yahay. Caddaanta bariiska iyo qallalka nori (cawska badda) sidoo kale waxay noqon karaan calaamado cusub.
Marka ay timaado tuna, khabiirka sushi ee Trevor Corson wuxuu leeyahay muuqaalku wuu khiyaanayn karaa, maadaama ay caado ka tahay warshadaha in gaaska lagu shubo tuna kaarboon monoksaydh si ay ugu muuqato mid casaan ah Taas oo macnaheedu yahay casaan-qaadku maahan calaamad muujinaysa inay cusub tahay. Haddii tuna ay umuuqato inay bunni ku wareegeyso geesaha, waxaad u baahan kartaa inaad doorato duuduubka khudradda.
Hilibka kalluunka cusub waa inuu ahaadaa mid adag oo soo kaban kara marka la cadaadiyo. Hubso inaad hubiso inaad fiiriso haddii sushi-gaagu buuxiyo shuruudahan kahor intaadan cunin.
Dhadhankee? Haddii sushi-kaaga uusan dhaafi karin urta, fiiri, oo dareemo tijaabooyin absolutely haba yaraatee ma jirto hab aad u dhadhamin karto. Cunto ku sumow mooyee adigu waa sheygaagii.
Intaa waxaa sii dheer, haddii sushi-kaaga la sii baakadeeyey hubi inaad hubiso taariikhaha dhicitaanka oo ha ka baqin inaad weydiiso shaqaalaha sida saxda ah goorta cuntadaada la diyaariyey.
Tilmaamo kale oo dhowr ah si loo hubiyo in khibradaada sushi ay tahay tii ugu fiicneyd ee abid soo marta:
Hel talooyin! Ereyga afka ama boggaga sida Yelp waxay u muuqdaan kuwo ku fiican jarista maqaayadaha daciifka ah waxayna kaa ilaalinayaan inaad lumiso waqti iyo xoog. Sidoo kale, khabiiro badan oo sushi ah ayaa kugula talinaya inaad ka boodo Axadaha maaddaama maqaayadaha Jabbaan aysan had iyo jeer lahayn kalluun cusub oo la keeno dhammaadka usbuuca. Makhaayadaha sushi ee tayada leh sidoo kale badanaa waa la xidhaa Isniinta.
Haddii aad awoodid, waa inaad ka fogaataa dhammaan-waad-cuni kartaa sushi. In kasta oo "heshiiska" laga yaabo inuu yahay mid duufsan, waxaad u badan tahay inaad ka qoomameyso. Sushi waxaa loo maleynayaa in laga sameeyay maaddooyin tayo sare leh, sidaa darteed maqnaansho la'aan ayaa sabab u noqon karta inaad hesho lacag aad u tiro badan oo kaliya 10 doolar.
Taasina waa sida aad ku ogaan karto haddii sushiku runti yahay mid cusub. Hubso inaad noosoo dhigto qadka haddii aad ka hesho wax sushi ah oo waaweyn oo mudan in la baaro.
Hore: Faa'iidooyinka Caafimaadka ee Kalluunka la dubay
Xiga: Siyaabo Fudud oo Laguugu daro Cuntada Badda